ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်း ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသလဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဟန်ဝင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၂
တချိန်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကော့သောင်းမြို့ (ကော့သောင်းမြို့ဆိုတာ ပင်လယ်ပြင်မှ သဲတွေကို စင်ကာပူကို ရောင်းနေနဲမြို့ ပေါ့) အနီးတွင် ပါချန်မြစ်မှနေပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ချော်ဖော်မြို့ကို ဖြတ်ပြီး ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောတွေသွားလို့ရအောင် ဖောက်ဖုို့ စီစဉ်ခဲ့ဖူးကြောင်း ကြားဖူးပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံက ကန့်ကွက်လို့ မလုပ်ဖြစ်ဘူးလို့ ကြားသိရတယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံကလဲ သူများရေပိုင်နက်ထဲ ပင်လယ်ပြင်မှာ ရေလမ်းဖောက်တာ လိုက်ပြီး ကန့်ကွက်နေတယ်။ ပင်လယ်ပြင်ပါ ကန်ထရိုက်ဆွဲထားတယ် ထင်တယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဒါမျိုး တ“ဦးပိုင်” ကန်ထရိုက်ဆွဲထားတယ် ဆိုတာရှိတယ်။ ဥပမာ … ပြရမယ်ဆိုရင် ကော့သောင်းမြို့မှာ ဂေါက်ကွင်းတကွင်းဆောက်ပေးမယ်၊ ပင်လယ်ပြင်ထွက်ငါး ဘယ်သူကိုမှ မရောင်းရဆိုတာမျိူး၊ နှစ်ပေါင်းများစွာမသုံးဘဲထား ထားတဲ့ရေခဲစက်လိုမျိုး၊ ကျွန်တော် တဦးတည်းလုပ်မယ်၊ ပင်လယ်မှထွက်တဲ့ ပုဇွန်တွေကို ကျွန်တော့်ကိုပဲ ရောင်းရမယ်လို့ ဆိုတာမျိူးတွေ … မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရွာတွေမှာ ဘယ်မှာတော့ ၇- ၈ ရွာလောက်ကို ဝက်တွေ မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ သတ်ပြီး မရောင်းရဆိုပြီးရှိတယ်။
အကယ်၍ စင်ကာပူ နိုင်ငံက မကန့်ကွက်ခဲ့ရင် ထားဝယ်ရေနက်ဆိမ်ကမ်း ဖြစ်လာမယ်လို့ မထင်ဘူး။ အခုတော့ ဒီဖက်က ရေနက်ဆိပ်ကမ်းမှာကနေ ကုန်းလမ်းကတဆင့် ဟိုဖက်က ပင်လယ်ကို ဖြတ်ထွက်ကြရတော့မယ် ဖြစ်ပါတယ်။
5 Responses to ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်း ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသလဲ
abd on November 8, 2012 at 7:32 pm
not clear what he explained.
he should explain clearly in the article. can not picture in our mind.
ဘဝ တကွေ့လေးမှာ လုပ်နိုင်ပါစေ ကိုင်နိုင်ပါစေ အများပြည်သူလိုတော ဒုက္ခမတွေပါစေ စိတ်ချမ်းသာပါေ on November 8, 2012 at 10:32 pm
ဘဝ တကွေ့လေးမှာ လုပ်နိုင်ပါစေ ကိုင်နိုင်ပါစေ အများပြည်သူလိုတော ဒုက္ခမတွေပါစေ စိတ်ချမ်းသာပါစေ ဆင်းရဲသားတွေရဲ မျက်နှာမျိုး ဘာကိုမှာ မခံစားရပါစေနဲ့ ပညာမရှိ တောသားတွေလိုပြောသမျှ ခေါင်းညိတ် မခံရပါစေနဲ့ အာနည်းသူတွေကို နှိပ်စက်ခံတာမျိုး ဘာတစ်ခုမှ မခံရပါစေနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ လူတစ်စုကို ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးပါတယ်
Naing on November 9, 2012 at 11:22 am
ကိုဇော်မင်း ရေးတဲ့ ဆောင်းပါး ရှိဖူးပါတယ် ။ပြန်ရှာပြီးတင်ပေးပါလား ။
kabarmakyay on November 9, 2012 at 7:20 pm
ဒါဘဲလား ဘာကိုပြောခြင်တာလဲဆိုတဲ့အထိ မရောက်သေးဘူးထင်တယ် ဆက်ရေးဖို့တိုက်တွန်း အားပေးပါတယ်။